Odoo ERP for Logistics Business - Global Connect Asia
Home/Odoo ERP for Logistics Business
ကဲ covid ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ မိမိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်မထားချင်သူတွေ လူအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာကို စိုးရိမ်နေသော လုပ်ငန်းရှင်တွေသာမက ဝန်ထမ်းများပါခံစားနေရသော epidemic anxiety တွေကိုဖြေလျော့ဖို့ GCAက အသင့်ရှိနေပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ERP System က Logistic Company တွေကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတာ ရှင်းပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ ERP system ကို အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေမှာ အကျယ်အပြန့် လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် logistic company တွေမှာ ERP cloud-based software system ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိ company​၏ management system ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ကူညီနိုင်သည့်အပြင် Human errors များကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်စွာ လျော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ERP system တစ်ခုရဲ့ logistic company ကို အထောက်အကူပြုပေးမယ့် နည်းလမ်းအချို့တွေကတော့…..
#Inventory_control (စာရင်းဇယားများကိုအသေးစိတ် အထောက်အကူပြု စစ်ဆေးပေးခြင်း)
– ERP system သည် centralized software system ဖြစ်သောကြောင့် logistic company တစ်ခု​၏ လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ / စာရင်းဇယားများ (eg. orders/ inbound and out bound sales / deliveries etc.) စသည်တို့ကို တစ်နေရာထဲတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း။
– အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ out-of-stock-products / orders များ / delivery problems များကို ချက်ချင်း သိရှိနိုင်ခြင်း။
#Distribution ( ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေရာတွင် အထောက်အကူပြုပေးခြင်း)
– logistic company တစ်ခု၏ အဓိကကျသည့် အပိုင်းဖြစ်သော the flow and distribution / transportation အပိုင်းကို central hub ( ဗဟိုထိန်းချုပ်ခြင်း) ပုံစံဖြင့် manage လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
– driver များနှင့် coordinators များကြားတိကျစွာ ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
#Staff_management (ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေး)
– နိုင်ငံအနှံ့ နေရာအနှံ့ မှာရှိသော မိမိ company မှ staffs များကို တစ်နေရာထဲမှနေ၍ manage လုပ်နိုင်ခြင်း။
– အလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်ရက်များ / အလုပ်ချိန် / နားချိန် နှင့် အချက်အလက်များ စီမံပေးခြင်း။
– Tracking staff on the road during transportation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းများအား ခြေရာခံနိုင်ခြင်း / လုပ်ခလစာနှင့် bonus များကို စီမံပေးနိုင်ခြင်း။
– ခွင့်ရက်များနှင့် casual staff / permanent staff / backup staff များကို စီမံပေးနိုင်ခြင်း။
#Customizable_system ( မိမိစိတ်ကြိုက် customizeလုပ်နိုင်ခြင်း)
– logistic company တိုင်းအတွက် မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်အောင် / company၏ အချက်အလက်များကို တိကျသေချာသောနည်းလမ်းဖြင့် လည်ပတ်စေနိုင်ခြင်း။
#Reduce_costs ( ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချနိုင်ခြင်း)
– ERP systemသည် တိကျမှန်ကန်ပြီးလျင်မြန်သောကြောင့် company ၏ မလိုလားအပ်တဲ့ monthly expenses များကို လျော့ချပေးနိုင်ခြင်း။
– Company ရဲ့ decision makers တွေအနေနဲ့လည်း information နဲ့ feedback ကို စောင့်စရာမလိုဘဲ ERP system ကနေ ကုန်ကျစရိတ်မများအောင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း။
ကဲဒါတွေပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးနော် GCA software Company ကနေ လူသုံးအများဆုံး လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ #trading#Manufacturing#Distribution#Transportation စသည့် Company ကြီးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အတော်ဆုံး developer တွေကနေပြီးတော့ system ကောင်းတွေကို ရေးဆွဲပေးနေပြီနော်။
လူကြီးမင်းတို့ သိချင်တာတွေ စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ GCA service team ကနေလည်း ဖော်ရွေစွာ စောင့်မျှော်နေပါတယ်နော်။
အခုလို covid ကာလကြီးမှာ GCA နှင့် လက်တွဲထားသော Company ကြီးများသာမက နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးက မိဘပြည်သူများလည်း ရောဂါကင်းဝေးကြပါစေလို့ GCA Companyမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်ရှင်။
By gcaadmin|2020-11-05T15:58:27+06:30October 28th, 2020|0 Comments